Fanajana fepetra ara-pahasalamana :: Milaza ny hanao be fiavy ny prefektioran’Antananarivo sy Toamasina • AoRaha
Fanajana fepetra ara-pahasalamana Milaza ny hanao be fiavy ny prefektioran’Antananarivo sy Toamasina
Hampihatra ara-bakiteny an’ireo toromarika nomen’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, tamin’ny sabotsy alina teo, mba hampanajana amin’ny an-tsakany sy an-davany an’ireo fepetra sakana hisorohana ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 ny prefektioran’Antananarivo sy Toamasina ambonivohitra. Niteraka resabe ny fiheverana fisian’ny goragora amin’ny famerana ny fitangorongoronan’olona tamin’ny Alatsinainy Paska, araka ny hita teto an-drenivohitra sy tany Toamasina.
Nambaran’ny Préfet-n’ny polisy eto Antananarivo, ny jeneraly Ravelonarivo Angelo, omaly, « ny famoahana didimpitondrana ho fanamafisana ny fampiharana an’ireo fepetra ireo anio. Haintsika fa nandia faran’ny herinandron’ny Paska isika teo, izay tsy nahafahana namoaka izany ka androany (Naotin’ny Fanoratana, omaly) vao vita ny didy izay hampiharina manomboka rahampitso », hoy izy, tamin’ny antso an-tariby.
Nolazain-dRazafiarison Jean Jugus, Préfet-n’ny polisy ao Toamasina ambonivohitra kosa fa « efa nohamafisina ary nandraisana fepetra hentitra ny fanarahana an’ireo toromariky ny Filoha hisakanana ny fiparitahan’ny valanaretina”.
Tsy mihoatra ny zato
«Namoaka didim-pitondrana izahay mialoha an’iny kabary iny ary nandray andraikitra foana sady hanohy mafimafy kokoa amin’ny fandraisana fepetra amin’izao fotoana izao », hoy itsy farany. Tsy hisy ny fepetra vaovao horaisina fa ireo izay nampahafantarin’ny Filohan’ny Repoblika ihany no hampiharin’ireo mpitandro ny filaminana eo ambany fibaikoan’ ny prefektiora eto Antananarivo sy Toamasina, izay isan’ ireo faritra roa nakatona noho ny fitomboan’ireo olona voan’ ny Covid-19.
« Hosaziana araka ny lalàna ireo izay mihoa-pefy », hoy ny jeneraly Ravelonarivo Angelo. Tafiditra amin’ireo fepetra tsy maintsy harahina ny tsy fahazoana mamory olona mihoatra ny zato manerana an’i Madagasikara. Eo ihany koa ny fanaovana ny arovava sy orona; ny fanajana ny elanelana iray metatra ka « hanasaziana amin’ny fanaovana asa iombonana ho tombontsoan’ ny daholobe, toy ny fandokoana sekoly, na fanadiovana hopitaly na ihany koa ny asa hitan’ny manam-pahefana fa mahasoa ny rehetra ».
« Hoporofointsika fa hadio tanteraka ny lalam-pirenena faharoa manomboka izao », hoy kosa ny fampanantenana nataon-dRazafiarison Jean Jugus nanoloana ny fanakianana mavaivay taorian’ny filazana ny fisian’ireo olona vory maro tany an-toerana tamin’ iny faran’ny herinandro iny.
Fanazavana tao amin’ny radio Antsiva « Azo omena fiarovana ny olona marefo », hoy ny talen’ny IMRA
Noho ny fihibohana Hotontosaina andavanandro ny ankamaroan’ireo fifaninanana
Fitsaboana :: Midangana hatrany ireo vidim-panafody